“Misaotra anao izahay, ry Andriamanitray ô, ary derainay ny anaranao kanto dia kanto.”—1 TAN. 29:13.
HIRA: 80, 50
Nahoana no asain’i Jehovah anomezana ho azy ny zava-tsarobidy efa nomeny antsika?
Inona no nataon’ny mpanompon’i Jehovah fahiny mba hanohanana an’ireo olona nampiasain’i Jehovah?
Ahoana no ampiasan’ny fandaminana ny vola fanomezana, amin’izao andro izao?
1, 2. Inona no mampiseho fa malala-tanana i Jehovah?
ANDRIAMANITRA malala-tanana i Jehovah. Avy aminy izay rehetra ananantsika. Azy daholo ny volamena sy ny volafotsy ary ny harena rehetra eto an-tany. Mampiasa azy ireny izy mba hahatonga ny zavaboariny ho velona. (Sal. 104:13-15; Hag. 2:8) Imbetsaka ny Baiboly no mitantara fa nampiasa ny zavatra ananany i Jehovah mba hanaovana fahagagana, ka hanomezana izay ilain’ny vahoakany.
2 Nanome mana sy rano ho an’ny firenen’Israely, ohatra, i Jehovah nandritra ny 40 taona, tamin’izy ireo tany an-tany efitra. (Eks. 16:35) “Tsy nisy nahory azy” ireo mihitsy vokatr’izany. (Neh. 9:20, 21) Nampitomboin’i Jehovah ny menaka kely nananan’ny vehivavy iray maty vady, ka afaka nandoa ny trosany sy nanam-bola hivelomana izy sy ny zanany lahy. I Elisa mpaminany no nampiasain’i Jehovah tamin’izy nanao an’izany fahagagana izany. (2 Mpanj. 4:1-7) Nampian’i Jehovah koa i Jesosy ka nahavita nanome sakafo rehefa nilaina izany. Nahavita nanome vola mihitsy aza izy.—Mat. 15:35-38; 17:27.
3 Tsy lany lanina ny zavatra ananan’i Jehovah, ary azony ampiasaina hikarakarana ny zavaboariny eto an-tany izany. Mbola asainy manome izay ananantsika ihany anefa isika mpanompony, mba hanohanana ny asa ataon’ny fandaminany. (Eks. 36:3-7; vakio ny Ohabolana 3:9.) Nahoana no asain’i Jehovah anomezana ho azy ny zava-tsarobidy efa nomeny antsika? Inona no nataon’ny mpanompony fahiny mba hanohanana an’ireo olona nampiasainy? Ahoana no ampiasan’ny fandaminana ny vola fanomezana voarainy? Ireo fanontaniana ireo no hodinihintsika ato.
NAHOANA ISIKA NO MANOME HO AN’I JEHOVAH?
4. Inona no porofointsika amin’i Jehovah rehefa manohana ny fandaminany isika?
4 Manome ho an’i Jehovah isika, satria tiantsika izy ary ankasitrahantsika ny zavatra ataony ho antsika. Tena manohina ny fontsika ny zavatra vitany. Miombon-kevitra amin’i Davida Mpanjaka isika. Rehefa niresaka momba ny zavatra nilaina mba hanorenana ny tempoly izy, dia niaiky fa avy amin’i Jehovah ny zava-drehetra ananantsika ary avy aminy ihany izay rehetra omentsika azy.—Vakio ny 1 Tantara 29:11-14.
5. Inona avy ireo andinin-teny manaporofo fa ampahany lehibe amin’ny fanompoantsika an’i Jehovah ny hoe mazoto manome?
5 Manome ho an’i Jehovah koa isika, satria anisan’ny fanompoana azy izany. Nahita fahitana ny apostoly Jaona, dia naheno an’ireo mpanompon’i Jehovah any an-danitra nilaza hoe: “Mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery ianao, Jehovah ô, eny, ry Andriamanitray ô, satria namorona ny zava-drehetra ianao, ary noho ny sitraponao no nampisy sy namoronana azy ireny.” (Apok. 4:11) Tsy miaiky ve ianao hoe mendrika ny hahazo voninahitra sy haja i Jehovah, ka tokony homena azy izay tsara indrindra ananantsika? Nasain’i Jehovah nilaza tamin’ny Israelita i Mosesy hoe tokony hanao fety intelo isan-taona izy ireo ka hiseho eo anatrehan’i Jehovah. “Tsy hisy hitondra tanam-polo” izy ireo, satria anisan’ny fanompoana azy izany. (Deot. 16:16) Mazoto manome koa isika satria mankasitraka ny asa ataon’ny ampahany eto an-tany amin’ny fandaminan’i Jehovah, ary te hanohana an’izany. Ampahany lehibe amin’ny fanompoantsika azy izany.
6. Nahoana no mahasoa antsika ny manome? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
6 Mandray soa koa isika rehefa malala-tanana, fa tsy faly mandray fotsiny. (Vakio ny Ohabolana 29:21.) Eritrereto ny ankizikely iray manome fanomezana ho an’ny dada sy mamany. Ny vola kely nomen-dry zareo azy ihany no nividianany an’ilay izy, nefa azo antoka hoe tena mankasitraka an’ilay izy ry zareo. Mety ho mbola miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreniny koa, ohatra, ny tanora iray mpisava lalana, dia manome vola kely ho fandraisana anjara amin’ny fandaniana ao an-trano. Raisin’ny ray aman-dreniny angamba ilay izy, na dia tsy nitaky an’izany aza izy ireo. Izany mantsy no fomba ampisehoan’ilay zanany hoe ankasitrahany ny zavatra rehetra ataon’izy ireo ho azy. Hoatr’izany koa i Jehovah. Fantany hoe mandray soa isika rehefa anomezantsika ho azy ny zava-tsarobidy ananantsika.
FANOMEZANA NATAON’NY MPANOMPON’I JEHOVAH FAHINY
7, 8. Inona no nataon’ny vahoakan’i Jehovah fahiny a) rehefa nisy tetikasa voafaritra tsara nila novitaina? b) mba hanohanana an’ireo nitarika ny asa nasain’i Jehovah natao?
7 Milaza ny Soratra Masina fa nanome izay nananany ny vahoakan’i Jehovah fahiny. Nisy fotoana izy ireo nanome zavatra mba hanohanana tetikasa voafaritra tsara. Nampirisika ny Israelita, ohatra, i Mosesy mba hanao fanomezana hanorenana ny tranolay masina. Hoatr’izany koa no nataon’i Davida Mpanjaka rehefa hanorina ny tempoly. (Eks. 35:5; 1 Tan. 29:5-9) Vola nangonina no nampiasain’ny mpisorona tamin’ny andron’i Joasy Mpanjaka, mba hanamboarana ny simba tamin’ny tranon’i Jehovah. (2 Mpanj. 12:4, 5) Nisy mosary koa tany Jodia tamin’ny taonjato voalohany, ka nila fanampiana ny Kristianina tany. Rehefa naheno an’izany ny Kristianina hafa, dia tapa-kevitra hoe “samy handefa fanampiana araka izay vitany, ho an’ireo rahalahy nonina tany.”—Asa. 11:27-30.
8 Nanohana an’ireo nitarika ny asa nasain’i Jehovah natao koa ny vahoakany. Tamin’ny mbola nanaraka ny Lalàn’i Mosesy, ohatra, ny Israelita, dia tsy nahazo anjara lova toy ny foko hafa ny Levita. Ny Israelita no nanome ny ampahafolon’ny zavatra nananany ho azy ireo, ka afaka nifantoka tsara tamin’ny asany tao amin’ny tranolay masina izy ireo. (Nom. 18:21) Nalala-tanana hoatr’izany koa ny vehivavy sasany tamin’ny andron’i Jesosy. “Samy nampiasa ny fananany hikarakarana an’i Jesosy” sy ny apostoliny izy ireo.—Lioka 8:1-3.
9. Avy aiza ny fanomezana nataon’ny olona fahiny?
9 Samy hafa ny fomba nahazoana an’ireny fanomezana ireny. Mety ho izay zava-tsarobidy nentiny avy tany Ejipta, ohatra, no nomen’ny Israelita mba hanorenana ny tranolay masina tany an-tany efitra. (Eks. 3:21, 22; 35:22-24) Ary ahoana ny tamin’ny taonjato voalohany? Nivarotra ny taniny na ny tranony ny Kristianina sasany, dia nomeny an’ireo apostoly ny vola azony. Ny apostoly avy eo no nizara an’ilay izy tamin’izay nila fanampiana. (Asa. 4:34, 35) Nisy indray nanokana vola tsy tapaka mba hatao fanomezana hanohanana ny asa nasain’i Jehovah natao. (1 Kor. 16:2) Nanome daholo àry ny rehetra, na nanankarena be izy na nahantra faraidiny.—Lioka 21:1-4.
AHOANA NO AZONTSIKA ANAOVANA FANOMEZANA?
10, 11. a) Inona no azontsika atao mba hanahafana ny mpanompon’i Jehovah fahiny? b) Nahoana ianao no manohana ny asan’ilay Fanjakana?
10 Mety hanao fanomezana koa isika mba hamitana tetikasa voafaritra tsara. Mila manorina Efitrano Fanjakana vaovao angamba ny fiangonana misy antsika, na mila manavao ny efitrano efa ananantsika. Hohavaozina angamba ny biraon’ny sampana misy antsika, na hisy fivoriambe hatao, na misy mpiara-manompo tra-boina. Ilana vola izany rehetra izany ka afaka manome isika. Manao fanomezana koa isika mba hikarakarana an’ireo miasa any amin’ny Foibe sy any amin’ny Betela eran-tany, ny misionera, ny mpisava lalana manokana, ary ny mpiandraikitra ny faritra. Azo antoka koa hoe mandefa vola tsy tapaka ny fiangonantsika mba hanohanana ny fanorenana Efitrano Fanjakana sy Efitrano Fivoriambe ho an’ireo mpiara-manompo amintsika eran-tany.
11 Samy afaka manome daholo isika mba hanohanana ny asa ataon’ny fandaminan’i Jehovah, mandritra an’izao andro farany izao. Tsy mampahafantatra ny anarany ny ankamaroan’ny olona manao fanomezana. Tsy tenitenenintsika koa hoe ohatrinona ny vola ataontsika ao amin’ny boaty ho an’ny fanomezana, any amin’ny Efitrano Fanjakana, na ny fanomezana ataontsika amin’ny alalan’ny jw.org. Mety hieritreritra isika hoe tsy dia misy dikany ny fanomezana omentsika. Fanomezana kely avy amin’olona be dia be anefa ny ankamaroan’ny fanomezana voarain’ny fandaminana, fa tsy fanomezana ngezabe avy amin’olona vitsivitsy. Manahaka an’ireo Kristianina tany Makedonia ireo mpiara-manompo amintsika, na dia ireo zara raha manam-bola aza. “Nahantra be” ireo Kristianina ireo, nefa niangavy mafy mba ho afaka hanome ary nanome be dia be.—2 Kor. 8:1-4.
12. Inona no ezaka ataon’ny fandaminana mba hampiasana tsara ny fanomezana voarainy?
12 Miezaka mafy ny Filan-kevi-pitantanana mba ho mendri-pitokisana sy ho malina rehefa mampiasa ny vola nataon’ny olona fanomezana. (Mat. 24:45) Mivavaka izy ireo mba hahay hanapa-kevitra, ary eritreretiny tsara izay tokony hampiasana an’ilay vola. (Lioka 14:28) Hoatr’izany koa fahiny. Nitandrina tsara ireo olona nasaina niandraikitra ny fanomezana, mba hampiasaina amin’izay tena tokony hampiasana azy ilay izy. Rehefa niverina tany Jerosalema, ohatra, i Ezra, dia nitondra fanomezana avy any amin’ny mpanjaka persianina. Volamena sy volafotsy ary zava-tsarobidy hafa ilay izy, ary 300 000 tapitrisa ariary eo ho eo ny vidiny raha amin’izao. Toy ny fanatitra an-tsitrapo ho an’i Jehovah ireo fanomezana ireo tamin’i Ezra. Nomeny toromarika mazava tsara àry izay niandraikitra an’ilay izy, mba ho voaro tsara ilay izy rehefa nandalo teny amin’ny toerana nampidi-doza ry zareo. (Ezra 8:24-34) Nanangona fanomezana koa ny apostoly Paoly mba homena an’ireo rahalahy tra-boina tany Jodia. Nataony azo antoka hoe voazara ‘tamim-pahamarinana, teo imason’i Jehovah sy teo imason’ny olona’, ireo fanomezana. (Vakio ny 2 Korintianina 8:18-21.) Manahaka an’i Ezra sy Paoly ny fandaminana misy antsika, ka mitandrina tsara rehefa mampiasa ny fanomezana voarainy.
13. Nahoana ny fandaminana no nanao fanovana tato ho ato?
13 Mety hanao fanovana ny fianakaviana iray mba hifandanja ny vola mivoaka sy ny vola miditra aminy. Na mety hitady hevitra izy ireo mba ho tsotra kokoa ny fiainany, ka ho afaka hanompo an’i Jehovah bebe kokoa izy ireo. Hoatr’izany koa no ataon’ny fandaminan’i Jehovah. Nisy tetikasa vaovao maromaro tato ho ato, ka nisy fotoana betsaka kokoa ny vola lany raha oharina amin’ny vola voaray. Mitady hevitra àry ny fandaminana mba hitsitsiana vola sy hahatonga ny fomba fiasa ho tsotra kokoa. Ahavitana zavatra betsaka amin’izay ny fanomezana voaray.
NY VOKATRY NY FANOMEZANA ATAONTSIKA
Mampandeha ny asa atao maneran-tany ny fanomezana ataontsika (Fehintsoratra 14-16)
14-16. a) Ahoana, ohatra, no ampiasana ny fanomezana omentsika? b) Inona no soa raisinao amin’ireny fandaharana ireny?
14 Maro amin’ny olona nanompo an’i Jehovah efa ela no milaza fa be dia be amin’izao ny fanomezana omen’ny fandaminana antsika, ary mbola tsy nisy hoatr’izany mihitsy. Lasa manana ny tranonkala jw.org sy Tele JW, ohatra, isika. Mihabetsaka koa ny fiteny andikana Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Nisy fivoriambe iraisam-pirenena tany amin’ny tanàna 14, tamin’ny 2014 sy 2015. “Katsaho Foana Aloha ny Fanjakan’Andriamanitra!” no foto-kevitr’ilay izy. Naharitra telo andro ilay izy, ary tany amin’ny kianja vitsivitsy anisan’ny lehibe indrindra eran-tany no nanaovana azy. Faly be mihitsy ireo nanatrika an’izany.
15 Maro no nilaza fa mankasitraka ny fanomezana omen’ny fandaminan’i Jehovah izy ireo. Nanoratra toy izao, ohatra, ny mpivady iray manompo any Azia: “Any amin’ny tanàna kely iray ny faritany nanendrena anay. Mahatsiaro ho irery izahay indraindray, dia lasa hadinodinonay hoe tsy izahay irery no manao ny asa asain’i Jehovah atao. Raha vao mijery an’ireny fandaharana isan-karazany ao amin’ny Tele JW ireny anefa izahay, dia tadidinay hoe manana rahalahy sy anabavy be dia be izahay eran-tany. Tena tian’ny mpiara-manompo namanay eto koa ny Tele JW. Matetika izahay maheno an-dry zareo milaza hoe lasa mahatsiaro ho akaiky an’ireo anisan’ny Filan-kevi-pitantanana ry zareo rehefa avy mijery an’ireo fandaharana mivoaka isam-bolana. Faly be ry zareo izao hoe anisan’ny fandaminan’Andriamanitra.”
16 Efa ho 2 500 izao ny Efitrano Fanjakana aorina na havaozina eran-tany. Nahazo efitrano vaovao ny fiangonana iray any Honduras, dia nanoratra hoe: “Faly be izahay fa anisan’ny fandaminan’i Jehovah sady manana rahalahy sy anabavy eran-tany. I Jehovah sy ry zareo no nanampy anay dia tanteraka ny nofinofinay hoe mba hanana Efitrano Fanjakana.” Be dia be koa no faly hoatr’izany rehefa nahazo Baiboly sy boky amin’ny fiteniny, na nahazo fanampiana tamin’izy tra-boina. Ny sasany indray nandray anjara tamin’ny fitoriana teny amin’ny toerana be olona, tany amin’ny faritanin’izy ireo. Nahita vokatra tsara izy ireo, ka tena mankasitraka an’ireny fandaharana ireny.
17. Inona no porofo fa manampy ny fandaminany i Jehovah?
17 Tsy azon’ny olona hoe ahoana no hahavitantsika ny asa rehetra ataontsika, nefa fanomezana an-tsitrapo daholo no ampiasaina amin’ilay izy. Nitsidika ny iray amin’ireo toerana fanaovantsika pirinty, ohatra, ny talen’ny orinasa lehibe iray. Gaga be izy hoe tsy mikarama ny olona miasa ao, ary fanomezana an-tsitrapo no ampiasaina fa tsy hoe misy zavatra hafa atao mba hahazoana vola. Nilaza izy hoe tsy mampino ny zavatra vitantsika. Miaiky an’izany koa isika! Fantatsika fa noho i Jehovah manampy antsika no mahatonga antsika hahavita an’izany.—Joba 42:2.
NY FITAHIANA AZON’IZAY MANOME HO AN’I JEHOVAH
18. a) Inona no fitahiana ho azontsika raha manohana an’ilay Fanjakana isika? b) Inona no azontsika atao mba hampirisihana ny zanatsika sy ny olona vaovao hanohana an’ilay Fanjakana?
18 Voninahitra ho antsika ny hoe avelan’i Jehovah hanohana an’ilay asa goavana mifandray amin’ilay Fanjakana. Manome toky izy fa hitahy antsika raha manao an’izany isika. (Mal. 3:10) Mampanantena izy hoe hovalian-tsoa izay malala-tanana. (Vakio ny Ohabolana 11:24, 25.) Ho sambatra koa isika raha tia manome, satria “mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.” (Asa. 20:35) Azontsika resahina amin’ny zanatsika sy ny olona vaovao hoe inona no azon’izy ireo atao mba hanohanana an’ilay Fanjakana sy hahazoana fitahiana be dia be. Afaka manome modely koa isika.
19. Nampirisika anao hanao inona ity lahatsoratra ity?
19 Avy amin’i Jehovah daholo izay ananantsika. Raha manome azy isika, dia hasehontsika hoe tiantsika izy ary ankasitrahantsika ny zavatra rehetra ataony ho antsika. (1 Tan. 29:17) Faly ny Israelita rehefa “nanao fanatitra an-tsitrapo” hanorenana ny tempoly, satria “tamin’ny fony manontolo” no nanaovany an’izany ho an’i Jehovah. (1 Tan. 29:9) Enga anie ka ho faly sy ho afa-po foana koa isika, rehefa anomezantsika ho an’i Jehovah izay efa nomeny antsika.
Ahoana no Hatao Raha Hanao Fanomezana ao Amin’ny Internet?